Ọdachi na Ọdụ Gaziray! | RayHaber
HomeTurkeyAla nke Anatolia Region27 GaziantepỌgba aghara na Ọdụ Gaziray
04 / 11 / 2019 27 Gaziantep, Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè, Ala nke Anatolia Region, General, Maps, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Turkey, VIDEO
ọtụtụ mere na ọdụ ụgbọ gaziray
Ọdachi na Ọdụ Gaziray! : Gaziantep Obodo Ime Obodo, nke TCDD'in Gaziray Suburban na-akwado na ọdụ ụgbọ elu nke ala mebiri n'ụzọ Başpınar. Hasan Şencan, onye otu CHP nke Şahinbey Municipal, onye natara ozi n'aka ndị ọchịchị site na ime nyocha na mpaghara ahụ, kwuru, sị, "Ejiri ọnụ ọgụgụ a wee wuo ụlọ a dị ka ọnụ nro. Kedu ọkwa zuru ezu bụ akụkọ nyocha ala nke ụlọ a? Ọ jụrụ, ma ọ bụrụ na e nweghị akụkọ nyocha ala? Şencan kwuru na ọdụ ụgbọ mmiri Başpınar bụ otu n'ime ebe mbụ ala ọma jijiji kwaturu wee kwuo, yapı Ihe owuwu a abanyela ala. ”
RepublicDika akuko si di na; "Gaziantep Obodo ukwu, 2017 afọ site na nkwado nke TCDD'nin 25 kilomita Gaziray Suburban Project na Baspınar okporo ụzọ ọdụ ahụ amatala na ida. Project Gaznay, nke a na-atụ anya imezu na 2020 Sahinbey Municipality CHP Council Member Hasan Şencan, na-enyocha mmejọ ndị ahụ mere na ala, kwuru na ihe a wụnyere n'ime ọdụ ebe mkpọka dị na ala ihe dị ka otu ọnwa, çök Crumbs na cracks guzobere na ala ala. A wụsara ihe dị n’elu ala iji gbochie ọdịda a. Dika ozi anyi nwetara n’aka ndi injinia, usoro a bu ihe efu. N'ihi na ekwuputara na a mere usoro a na-enweghị akụkọ nyocha ala. Usoro a wubere iji mejupụta ala n’ime ụlọ anaghị eme ka ụlọ a sikwuo ike. Ihere meela ego ị ga-eji ”. Nso ike Lelee profaịlụ Ọhụụ nke Guler banyere 800 nde TL Şencan kwuru na yapı Ejiri ezigbo ihe dị ka ọnụ ahịa e jiri wuo ya. Kedu ọkwa zuru ezu bụ akụkọ nyocha ala nke ụlọ a? Ka emere ya n’emeghi nnyocha nyocha ala? Maazi Gaziantep nke Obodo Ndị Isi Obodo Fatma toahin kwesịrị ịkọwa ọha na eze site na ịza ajụjụ ndị a. ”
AKP AKA AKPIRI AKP
Şencan kwuru na ọdụ ụgbọ oloko Başpınar bụ otu n'ime ebe mbụ ala-ọmaala ala ọma jijiji ọ ga-enwe wee kwuo, na-amata tupu e wuo ihe owuwu, a chọrọ mkpesa nyocha ala. N'ime akụkọ a, na-eji data Geotechnical; Ihe omuma nka di nkpa dika ike ala, okpukpu ala, onu ogugu nke ala. N'ime akụkọ nyocha ala, ọ bụrụ na ụkpụrụ metụtara ala ezughị oke ikike onye rụrụ ya, a ga-emeziwanye ala. Izu ike nke ala a enwetazu. Agbanyeghị, mgbe e wusịrị ụlọ ahụ, ụzọ ndozi etinyere n’ala anaghị erute ọkwa achọrọ. Ihe owuwu a, nke etolitekwara n’elu eriri nwere ụdị ọrụ a, kwesịrị ka akpachara anya. Ihe owuwu a abanyela n'okpuru idozi nrụrụ ”. Gaziantep Metropolitan Municipal na TCDD n’okpuru Protocol nke etinyere n’agbata eriri Gaziray, Minista ikpe Abdulhamit Gul, Ndị Isi Obodo Fatma Sahin na ndị otu AKP na ntinye aka na nnwale nnwale ahụ. Ka a na-agbasa ozi banyere nnwale ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta, mkparị nke AKP Gaziantep osote Ahmet Uzer megide ụmụ amaala na-elele nnwale nnwale “Ha dị ka ihe a na-ahụ n'ụgbọ okporo ígwè ahụ” gosipụtara na onyonyo. Ihe onyonyo a natara ezigbo nzaghachi na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mberede mere na ọnụọgụ dị elu na Malatya Na-akpata 3
Nkowa nke Onye Nwepu: AKS Team Disas Loose na Assembly Press Machine gah
Sogucak 1 Nke Railway emechiri n'ihi Collapse ök
Okuku agha n'oge tramway na Izmit
Ngosipụta ọmịiko: Stacker Manpower based Covertain
3 site na Minista Turhan. Ọnuku nsogbu na ọdụ ụgbọ elu Apron…
Mgbawa bọmbụ na ụgbọ okporo ígwè dị na Cologne
Scandal na ọdụ ụgbọ oloko India
Nkwupụta nke Mgbapụ: Mkpọrọ dị na Karaisal Karabucağı Ọdụ…
Akwa Azụ na Pendik Metro Station